नेप्सेले सेयरधनीलाई मालामाल गर्दा किन रुष्ट भए कर्मचारी ? एजीएम गरे बहिष्कार Bizshala -
नेप्सेले सेयरधनीलाई मालामाल गर्दा किन रुष्ट भए कर्मचारी ? एजीएम गरे बहिष्कार
काठमाण्डौ । आफ्ना सेयरधनीहरुलाई मालामाल बनाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफ्नै कर्मचारीलाई भने सन्तुष्ट पार्न सकेन। जसका कारण आज बसेको नेप्सेको ४० औँ वार्षिक साधारणसभा कर्मचारीहरुले बहिष्कार गरे।
नेपालको एकमात्रै स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले छुट्टै इतिहास बोकेको छ। कुनै समय बाटुलेघरमा रु. १ करोड पुँजीबाट सुरु भएको नेप्सेको आजको वार्षिक साधारणसभाबाट ६० करोड रुपैयाँको पुँजीलाई बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ।
सभाले नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुका लागि प्रस्ताव गरेको कुल १६६.६७ प्रतिशत लाभांश (६६.६७ प्रतिशत बोनस सेयर र १०० प्रतिशत नगद लाभांश) वितरण प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर, कर्मचारीहरु भने आफूले गत वर्षको नाफाबाट मागेको ५ प्रतिशत बोनस सेयर नपाउँदा रुष्ट बनेका छन्। सोही कारणले उनीहरुले नेप्सेको वार्षिक साधारणसभा बहिष्कार गरे।
नेप्से भवनको तल्लो तलामा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीर्घराज मैनालीले शुभकामना सन्देश दिए। नेप्सेका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञजन फुँयाल र कम्पनी सचिव मुराहरी पौडेलले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिएका थिए। तर, त्यही भवनको माथिल्लो तलामा काम गरिरहेका नेप्सेका कर्मचारी भने तल झरेनन्।
कार्यक्रमपछिको गुलियो मिठाईसँगै नेप्सेका उच्च तहका कर्मचारी आफैँ अमिलो यर्थाथ पौख्दै थिए। एक कर्मचारीले भने, ‘अब आउने सीईओलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेप्सेभित्रैको व्यवस्थापन मिलाउनु नै हुनेछ।’
कर्मचारीलाई दिने भनेको बोनस सेयरमै चित्त नबुझेर आफूहरु वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा सहभागी नभएका अर्का एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीले ५ प्रतिशत सेयर मागेका थियौँ तर १ प्रतिशतमात्रै दिने भनिएको छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘यसैमा चित्त नबुझेर हामीले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हौँ।’
नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले भने आफूहरुले सबै कर्मचारी कार्यक्रममा सहभागी हुन आमन्त्रण गरे बताए। ‘तर उहाँहरु किन सहभागी हुनु भएन यसबारेमा थाहा भएन’, ती अधिकारीले भने।
नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।